नयाँ बर्ष | मझेरी डट कम
ramhari — Sun, 06/10/2012 - 22:46
हिउँदमा सप्पै लाइ लागेर कालो पोको परेको रोगी सिमीमा पनि नयाँ आँकुरा र पात पलाए। यो केराको सानो बोट Û काठमाडौँको चिसो ठाउँमा हुँदैहुँदैन भनेकी हुँ मैले। 'मेरो 'अफिस'अगाडि फलेको केरा त हामी वर्षैपिच्छे खान्छौँ, कत्ति मीठो,' उसले भन्यो, 'त्यसैको बधुनो त हो, जिद्दी गर्योठ सार्यो ।'
चिनियाँ दुबो हरियो भएर आइपुग्यो। बकुल्लाका बोट घमाइलो हावामा हल्लिरहेका छन्। सुन्ताला र कागतीका बिरुवा नयाँ पालुवा झिकेर तोतेबोली बोल्न खोजेझैँ देखिएका छन्। घिउ सिमी, बोडी र फर्सी भरर्रै उमि्रसके। अस्तिसम्म तुसारोले कठ्याङ्गि्रएको यस माटोले यत्ति छिट्टै प्रसूति हुने ऊर्जा कहाँबाट पाउँदो हो ? यसैबेला मलाई आˆनो पेट पनि छाम्न मन लाग्छ।
उस् Û ऊ आउने दिन वैशाख १ गते कहिले आइपुग्ला ?
पल्लो छिमेकीले आरुको रूख लगाएको कति राम्रो Û शिवपुरीको तल्लो काँठमा सप्पै 'प्लटिङ' गरेर धमाधम नयाँ घर बनाइसक्यो। माथिल्ला चुचुरा बिस्तारै गाढा हरियो भएर आइसके। अहिले घामको तुवाँलोमा सेम्पु गरेजस्ता देखिए। प्रकृतिले यो नव वर्ष बडो 'रोमान्टिक मुड'मा मनाउने तयारी गरिरहेको लाग्छ मलाई।
'वसन्तको अन्त्य भई ग्रीष्मका उष्म दिनहरू थाल्ने बेला पनि यो खाल्डो काठमाडौँ किन अझै तातोले मात्तिँदैन ?' एक महिना पहिले ऊसँग मात्तिन मन लागेर मैले ओछ्यानमा भनेको आˆनै वाक्य सम्झन्छु। मलाई कति लाज लागेको त्यत्ति भन्दा पनि।
एउटै वस्तु किन यसरी तुरुन्तै भिन्न रूपमा रूपान्तरित हुन्छ ?
यसको जागिर धनकुटा पुगेको छ। सरकारी जागिर र सरुवा पर्यायवाची हुन्। 'अफिस'को साँचो हातमा लिएपछि कस्तो अप्ठ्यारो। दुई-चार रुपियाँ तल-माथि परोस्, सधैँ टाउको दुख्छ। डेरा सर्दै हिँड्दै गर्दा 'घर भएन', 'घर भएन' भनेर सधैँ उसको टाउको खाइरहेँ। अब यो घर नामको पहरो कुरेर एक्लै बस्।
कति दिनदेखि थुपि्ररहेका छन् पत्रिका। दिनहुँ फालेर जान्छ, पढून्, नपढून्। मुस्किलले दिन बित्छ, रात बित्छ रात बित्तैन। छटपटाएर रात घिस्रन्छ, दिन मरे बित्तैन। तर, म आजको 'पे्रग्नेन्सी रिपोर्ट'ले बारम्बार उत्तेजित छु।
चौधधन्टे लोडसेडिङ सकिएर बत्ती बल्यो झल्याँस्स भएँ। पत्रिकाका 'हेडलाइन'मा आँखा डलाउँछु ः
५. सामूहिक बलात्कारपछि मानसिक असन्तुलन
पत्रिकाहरू पर हुत्याउँछु, पढ्न सक्तिनँ, डर लाग्छ, त्यै जागिरले त हो नि, त्यो पनि कहिले मित्र र कहिले शत्रुजस्तो। नखाएर पनि नहुने, खाएर पनि कहिल्यै खर्च नटर्ने। अहिले कस्तो डर लागेको। मोबाइल उठाउँछु, डायल गर्छु।
'हलो Û हलो Û' अहिले मेरो आवाज आतङ्कित छ।
अहँ नव वर्षको उपहार दिनेछु तपाईंलाई।'
'केको खबर हरे छिटो भन न Û'
एक वर्षजस्तो लामो महिना बित्यो। पाँच दिन त बिताउनु छ, अब। अनि नव वर्षको स्व्ााद लिनेछु। वसन्तको स्व्ााद लिनेछु।
अब सपनामा र कल्पनामा मात्र होइन, यो लामो प्रतीक्षापछिको पे्रमोत्कर्षमा म आफूलाई साँच्चिकै पगालेर बगाइदिनेछु।
आज चैत मसान्त। साँच्चै यो दिन कति उज्यालो। नुहाएँ, पूजा गरेँ, घर सफा गरेँ, बजार गएँ र झोलाभरि सामान लिएर फर्कें।
वैशाख १ गते। प्रतीक्षाका दिन सकिए। कति चहकिलो यो घाम Û कति प्यारो यो पुत्ताउँदो गर्मी Û कति सुन्दर यो बस्ती र पारि पाखाका घना वृक्ष Û कति सुन्दर यो जीवन।
'ल सुन् राम्रोसँग, तेरो लोग्ने हाम्रो कब्जामा छ, तुरुन्त ५० लाख रुपियाँ फिरौती तयार पार्, कुन ठाउँमा कसरी पुर्याँउने हामी पछि भन्नेछौँ। कुनै पनि चलाखी नगरेस्, पीर नगर्। सुरक्षित छु कसैले भन्नु पर्दैन। कहिले, कहाँ, कसको पालो आउँछ हामीलाई मात्र थाहा छ।
अहिले तँलाई पनि नव वर्षको शुभकामना !
(नमूना मच्छिन्द्र क्याम्पस लगनखेल ललितपुरमा प्राध्यापनरत डा.दीनबन्धु शर्माको यो कथा गोरखापत्रको शनिवासरिय जेठ, २०६९ बाट साभार गरिएको हो )